zvose 4 /Inowirirana Live Session 0 /EURUSD 0 /Forex Education 0 /Forex anonongedzera 0 /Forex Kutengesa Kuongorora 0 /Forex Kutengesa Blog 0 /kutanga 4 /Indicies 0 /Urarame Bhuku Rekushandisa 0 /akakwanisa Accounts 0 /Musika Dzidzo 3 /Musika Pfungwa 0 /Media 0 /nhau 0 /Technical Analysis 0 /Uncategorised 0
Chinhu chekutanga chandinoda kuudza vanhu vanofarira nyika yekutengeserana ndechekuti iwe unofanirwa kutanga watanga kuwana hwaro hwekuziva usati watombofunga nezvekuisa kutengeserana kwako kwekutanga. Mupfungwa dzangu izvi zvakakosha. Iyi ndiyo indasitiri yemabhebhi nemapiranasi ari kutsvaga nyore kutora. Sezvinoita hove diki dzinokurumidza, kushambira mumvura iyi kunogona kunyengera. Chinhu chimwe chinhu kutasva nema whale, ndechimwe chinhu zvachose kana paine ropa mumvura kana iwe ukabata yangu yekudonha. Kutaura nezvegungwa, nyika yekutengesa pachayo yakafanana neitsime risingazivikanwe rezivo, iro pasi rinongoputirwa nevashoma kwazvo veCousteau. Zvandinoreva kutaura kuti pane ruzivo rusingaperi munhu anogona kuwedzera pamusoro pehupenyu hwese, asi zvakadaro hunyanzvi hwekutsvaga uku kuri kudzikisa ruzivo urwu kusvika kuchimiro charo chakanyanya uye kuita pariri. Izvi zviri nyore kutaurwa pane kuzviita. Kuti usvike ikoko, unofanira kutanga watanga kudzidza kwete zvekutanga, asi zvekuchengetedza mamiriro zvakare. Bata iyi yekutsvaka sezvaungaita yako yekuchengetedza hupenyu setifiketi. Iwe unofanirwa kuziva nezve njodzi dzako kutanga usati waponesa munhu, sekunge pasina moto, pasina waya, hapana gasi, kana girazi. Mupfungwa kana uchigona kuponesa mumwe munhu, unogona kuzvidzivirira panjodzi. Izvi ndizvo zvakakosha pakutengesa. Iwe ungatokwanisa kushambira ne shark rimwe zuva kana uchiziva zvauri kuita chaizvo. Ndiwo kupenga kunoita kutengesa.
Imwe yemazano akawanda ekutengesa ndeyokuti iwe unogona kuita mari yakawanda. Ferrari's, vakadzi vanokurumidza, vapfumi cigar. Unogona kuva nazvo zvese! Chokwadi chiri vashoma kwazvo vanosvika izvi zvipikiri zvekubudirira, uye ichokwadi nezvekutevera. Izvo zvisingaiti zvakadaro zvinotengeswa semhedzisiro yekungotora kosi yangu. Wese munhu ari kuzviita. Haudi here kuita mari?
Chinonyanya kukosha chikamu chekudzidzira kutengesa kana uchinge wavaka hwaro hwekuziva uye nekugadzira yakarongwa sisitimu ine hwaro hwehuwandu - chinhu chatisina kukurukura pano, chiitiko chekudzidzira kuita. Tiri kutaura 'bout kudzidzira! Pane mutsauko pakati pemaitiro akanaka, uye akaipa. Iwe unofanirwa kukudziridza zvine mutsindo, zvakanyatsofungwa maitiro izvo iwe zvaunogona kudzokorora zvakapfuura kusvikira vaita chechipiri chimiro. Kutengesa chiitiko, uye kushanda kunoenderana neiyo. Kuti uite pamwero wakakwirira iwe unofanirwa kudzidzira pane yakakwirira nhanho. Haufanire kumbogutsikana. Uropi hwako imhasuru, uye iwe unofanirwa kuirovedza senge chero rimwe boka retsandanyama, kuburikidza nekudzokorora kazhinji. Iwo makuru anogara ari munzvimbo yekumhanyisa kusati kwatanga. Kutengeserana hakuna kusiyana.
Op-Ed mutengesi anoshingairira uye mudzidzi wezvinhu zvese hupenyu, aine pfungwa yakafemerwa yebasa rekubatsira vamwe kuzadzisa zvinangwa zvavo uye zviroto. Ed ane makore manomwe ezvemari nekutengesa ruzivo, ave aine maviri ese akamboshanda parutivi rwemabroker, pamwe neprop yekutengesa uye mukutsigira kwekutengeserana. Akamboshandawo seyenyanzvi kambani yemari mutengesi uye anotarisana zvakanyanya neGoridhe, iyo S&P ne Forex. Ed anofarirawo kutanga kudzidzisa vadzidzi zvakanyanya pamisikidzo, sezvaakange asina kurongeka makore apfuura. Anogara aripo kuti ataure shopu.
Vhiki YePundutso Yekutora + Inotevera Svondo Musika InsightJuly 3, 2020 - 1: 40 pm
4.8 Million Mabasa Akawedzerwa munaJune + GBPUSD ShortsJuly 2, 2020 - 1: 53 pm
US Dollar Bullish Yerusununguko Svondo?June 29, 2020 - 1: 15 pm
Vhiki YePundutso Yekutora + Inotevera Svondo Musika InsightJune 26, 2020 - 1: 33 pm